Waxyaabaha Soo Dedejiyo Furiinka Ama Kala Taga Lamaanaha.. “Qodobo Muhiim Ah” - Hablaha Media Network
HMN:- Waxaa jiro arimo badan oo lamaanaha u horseedi karo in uu soo degdego kala tagoda ama aan iraahdo furiinka, shabakada Allsiyaasad.com waxeey kuusoo gudbineeysaa sagaal qodob oo soo dedejiyo furiinka.
Hadaba qodobadaan u fiirso oo ka fogoow midka aad hadda isleedahay waa ku dhaqantaa iyo dhamaantoodba….
1- Hantijacayl, haddii ruuxa uu bakhayl yahay oo uuna rabin inuu keeno waxa loo baahan yahay ee guriga ku saabsan, middaas waxay soo dedejin kartaa dalaaqa
2- Qaabka carruurta loo tarbiyeeyo taasna waxa keeni kartaa khilaaf soo dhexgali kara laba isqaba
3- Galmada oo si fiican looga dhergin, haddii uuna ka dhergeynin ruux ka mid ah laba isqaba waxaa laga yaabaa inay arrintaas keento nacayb iyo kala tag
4- Shaqada guriga, dadka qaarkii waxay rabaan in la isla qabto shaqada guriga, haddii midkooda ka soo bixi waayo shaqadaas waxaa laga yaabaa in la kalatago siiba dadka ku nool yurubta.
5- Kalama maqnaansho daran oo keeni kara in labada ruux ay is illaawaan ama safar dheer ama la sheekaysi la’aan.
6- Saaxiib xun, haddii midkooda uu leeyahay saaxib xun kan kalena uuna rabin taas waxay keeni kartaa kala tag
7- Haddii midkooda uu leeyahay dhaqan xun kan kalena uuna ka helin sida qayilaada oo kale.
8- Qaraabo xun, marmar waxaa guriga dumiya ninka dadkiisa ama naagta dadkeeda
9- Rajo aan dhab ahayn il iska dhaadhiciyo in lacag farabadan la helayo ama guri fiican lagu noolaanayo wixiina aan la helin, inta badan waxay dhacdaa marka la is shukaansanayo